I-Disney kunye neKamva likaSony elingaqinisekanga likaTom Holland's Spider-Man - Iimuvi
Eyona Iimuvi Ixesha elizayo likaTom Holland's Spider-Man alikho kude
Ixesha elizayo likaTom Holland's Spider-Man alikho kude
Yintoni eza kulandela iMarvel Comics oyena mntu udumileyo kwiscreen esikhulu yinto yokuthelekelela nabani na.KwiMarvel Studios / Sony
Ukuphela konyaka, iMarvel Studios iya kube ikhuphe iifilimu ezine kunye nomdlalo kamabonakude weDisney + ezintandathu. Ngalo mthamo uthandekayo, ngakumbi kunyaka oxineneyo we-COVID, kufanelekile ukucinga ukuba i-Marvel Cinematic Universe ikhule kakhulu ukuba ingaphumeleli okanye, ukuba njengayo yonke enye into e-Hollywood, akukho nto intle ingahlala ngonaphakade.
Kwisikimu esikhulu se-MCU esiqhagamsheleneyo nesicwangciswe ngobunono, ngoDisemba Indoda yesigcawu: Akukho Ndlela yokuGoduka kuphawula indawo enqabileyo eyimfama egutyungelwe kwindawo engaziwayo. Ifilimu iyakufezekisa isivumelwano sikarhulumente phakathi kweDisney kunye neSony evumela ukuba ezi studio zimbini zabelane ngamalungelo kuTom Holland's Spider-Man. Yintoni eza kulandela iMarvel Comics oyena mntu udumileyo kwiscreen esikhulu yinto yokuthelekelela nabani na.
NgoLwesihlanu, uSony Mfanekiso weQela leMifanekiso yoMfanekiso uSanford Panitch uvumile ngokungathandabuzekiyo ukuba sikhona isicwangciso sokuzisa uHolland's Spidey kwindalo entsha kaSony yabalinganiswa beMarvel ebandakanya uTom Hardy's Ubuhlungu , UJared Leto ozayo Morbius kunye no-Aaron Taylor-Johnson osandula ukubhengezwa UKraven uMzingeli . Ndicinga ukuba ngoku mhlawumbi kuya kucaca ngakumbi ebantwini apho siya khona kwaye ndicinga ukuba nini Akukho Ndlela iKhaya uyaphuma, nangakumbi kuya kutyhilwa, uxelelwe uPanitch Ezahlukeneyo .
Ukuqonda ngcono imeko ye-nebulous, sifuna ukuphonononga iindlela ezahlukeneyo ezinokuthathwa kunye nokuba zinokuthetha ntoni ngekamva lomlinganiswa nangaphaya. UMichelle (Zendaya) ubamba ukukhwela eSpider-Man e-Columbia Imifanekiso ' Indoda yesigcawu: Kude nekhaya .UJoJo Whilden / u-Sony
Iharrys razors vs club yokucheba iidola
Kutheni iDisney kunye no-Sony kufuneka baqhubeke nokwabelana ngeSpider-Man
Ngaphambi kokuba singene kwisiphelo esinzulu, kufanelekile ukukhumbula ukuba okwangoku asazi ukuba uhambo lomlinganiswa luya kudlala njani ngaphakathi kweNdawo yeMiboniso bhanyabhanya eMarvel. Indoda yesigcawu: Akukho Ndlela yokuGoduka— enamahemuhemu amakhulu okungena kwimimandla eyahlukeneyo, abalinganiswa abavela kwi-Spidey-franchise ezahlukeneyo ezinje ngeJamie Foxx's Electro kunye noAlfred Molina's Dock Ock, kunye nokuphindaphinda kukaPeter Parker- banokuhamba ngendlela engalindelekanga ebeka inqanaba elilandelayo yohambo lomlinganiswa. Ukusebenzisana kukaDisney no-Sony kubonise ukuba kunesiqhamo kakhulu kuwo omabini amacala ngendlela enokuthi ibeke umzekelo wezivumelwano zokuyila phakathi kwabo, kunye nezinye iinkampani kunye neefranchise, ukuya phambili (ngakumbi kuloo nto kancinci).
Xa ufumana amandla okudityaniswa kokuzisa izinto ezimbini ezisebenza njengabagcini beSpider-Man kunye, yindibaniselwano enamandla kakhulu enokuthi umntu ngamnye angabinayo indawo eyoneleyo kumacandelo okuyila nawokuthengisa, uPaul Dergarabedian, umhlalutyi osasazo omkhulu eComscore, uxelele uMqwalaseli.
Umbono wokususa uSigcawu-mntu kwi-MCU ubonakala ngathi yimpazamo enkulu enokubakho.
Indoda yesigcawu: Kude nekhaya , eyayisebenza njenge-epilogue yeentlobo ze Abagibeli: Umdlalo wokugqibela , waba yeyona bhanyabhanya iphambili ka-Sony kwimbali ye studio ene- $ 1.13 yezigidigidi kwihlabathi liphela ngelixa Indoda yesigcawu: Ukuza ekhaya uzuze i- $ 881 yezigidi ezisempilweni kwintengiso yetikiti lehlabathi. Kwiimidlalo bhanyabhanya zemidlalo bhanya-bhanya ezisibhozo ezikhutshwe nguSony, zikwindawo yokuqala neyesithathu kwiziphumo ezingenakulungiswa. I-standalone ye-MCU Spidey flick iphakathi kwi-362 yezigidi zeedola kwi-ofisi yebhokisi yasekhaya, encinci Umntu Omangalisayo weSigcawu I-franchise ($ 232 yezigidi) kodwa isemva kwe-trilogy yasekuqaleni kaSam Raimi ($ 371 yezigidi), ngedatha yeComscore nganye. Ukude neKhaya Yeyesibini esine-soloy Spidey flick esine-4.2x yokuphindaphinda kwasekhaya, okanyeuninzi lwefilimu yokugqibela kumanani ayo okuqala. Yayiyifilimu yesibhozo enenzuzo enkulu ngo-2019, nge Umhla wokugqibela , ngelixa Ukuza ekhaya ibiyi Okwesixhenxe kunenzuzo enkulu Flick ka-2017.
Ibali elifutshane: isivumelwano seDisney-Sony siphumelele kakhulu. Ewe kunjalo, loo nto ayimthinteli u-Sony ekubuyiseleni kuphela umlinganiswa.
Ekugqibeleni, ukuba nesigcawu-sendoda esiyinxalenye ye-MCU kuye kwaba kukufezekiswa okumangalisayo kweminqweno yabalandeli kunye nokwoneliseka kwabaphulaphuli, uShawn Robbins, umhlalutyi oyintloko kwi-Box Office Pro, uxelele uMbonisi. Ihlala ihleli etafileni njengeyona ndlela yokubhala amabali, kodwa kufanelekile ukuba namandla okuvumela umlinganiswa kunye nazo zonke izinto ezinxulumene noko zokuyila banandiphe ixesha labo elangeni.
URobbins uphawula ukuba ubutyebi bukaPeter Parker butyebile ngokwaneleyo ukuba buthethelele kwezi ndlela zimbini kwaye, xa unikwe umkhondo wamabali amakhulu e-MCU, kuhlala kunokwenzeka ukuba kungakho ngaphezulu kwenguqulelo enye yeSpider-Man yokuhamba ngaphaya kwescreen esikhulu. Esi yayisisiseko sopopayi ophumeleleyo ophumelele u-Oscar Indoda yesigcawu: Kwivesi yesigcawu , eyona yeyona nto iphambili kuyo yonke i-Spidey flick. Nokuba i-DC iqinisekisile ukuba abaphulaphuli beli xesha bavulelekile kwiinguqulelo ezininzi zeqhawe elifanayo kwiindlela ezahlukeneyo kunye neendaba zamabali. Iicomics ngokwazo zibonelela ngesona sisombululo silula njengoko uninzi lwabalandeli bamaqhula besazi amaSigcawu-Amadoda amaninzi abaleka macala onke ( I-Spider-Man engenamda , Iimbali ezingachazwanga zesigcawu-sendoda , njl.).
Umbono wokususa iSigcawu-Man kwi-MCU ubonakala ngathi uyimpazamo enkulu, uKendall Phillips, unjingalwazi kwiYunivesithi yaseSyrause yaseKholeji yoBugcisa nezoBugcisa efundisa Ubungqina beFilimu: Indalo yeCinematic Universe , uxelele uMqwalaseli. UPhillips uyayivuma impumelelo yangaphambilini u-Sony ayonwabeleyo nge-standalone Spidey flick, kodwa uqaphele ukuba abalandeli abaninzi bangoku banxulumana nomlinganiswa ngokusondeleyo noTony Stark, Star Lord, Thanos kunye neMCU. Kodwa ke, uyakubona ukubanakho kuseto lwe-Man-Spider-Man.
Ithemba lokuqhubeka kwesigcawu se-Spider-Man esihambelana ne-MCU kwaye sahlukile kwezinye iifilimu ezijolise ku-Spider-Man ziya kulunga nesiko leencwadi ezihlekisayo ezinde, utshilo uPhillips Ewe kunjalo, oku kuthatha uTom Holland ukulungele ukubhalisela ukhenketho olude lomsebenzi kwiitights ezibomvu neziluhlaza.
USony ufuna iSpider-Man ngaphezulu kweDisney. Unqwenela njalo.
Kwincwadi yam, yonke into yehla ibali elinamandla elijolise kumbono ophambili, utshilo uRobbins. Kuyinyani kwiifilimu ezizimeleyo, eziqulathe uthotho kunye neeyunivesithi ezibanzi ngokufanayo. Andithandabuzi ukuba umlingiswa othandwa lihlabathi lonke njengoSpider-Man unokuphinda aphumelele yedwa ngaphandle kokudlala indima kwimidlalo bhanyabhanya, kwaye ukuba iziganeko zeMCU ngokwasemzimbeni zimkhokelela kude neDisney kwicala lophawu olumangalisayo okomzuzwana, isenokungabi yingozi kuhlobo lwesigcawu-sendoda ukuba nje abagcini bayo bahlala bezibophelele kumgangatho ophezulu wokubaliswa.
Kwangelo xesha, i-Hollywood lishishini elisezantsi kwaye umgxeki kuthi sonke angonwaba ukuba ubuncinci asiyonwabisi into yokuba izimvo zikaPanitch yayiliqhinga lokuthetha esidlangalaleni lokufumana isivumelwano esingcono sokuqhubeka nobambiswano neMarvel . U-Sony kudala ezama ukufumana indalo yakhe ekwabelwana ngayo nge-cinema ye-Marvel emhlabeni, ukanti izicwangciso zophuhliso ezibiza imali eninzi zalahlwa emva Umntu omangalisayo weSigcawu 2 bathotyelwa phantsi ngokwasezimalini nangokugxekayo. Yiyo le nto ikhokelele uSony ukuba axoxisane neDisney kwasekuqaleni.
Kodwa ukuba u-Sony ngenene akanamdla ekugqibeleni athengise iSony Pictures, i-CEO yombono uKenichiro Yoshida yomelezwa kwiveki ephelileyo , ke kutheni uqhubeka ukwahlula inzuzo yepropathi yayo enexabiso kunye nembangi?
Ukuya kuthi ga ngoku nge-IPs, akukho nanye kwiqashiso likaSony elithelekiswa neWebhu Slinger, UJeff Bock, umhlalutyi webhokisi ephezulu kwi-Exhibitor Relations, uxelele uMbonisi. USony ufuna iSpider-Man ngaphezulu kweDisney. Unqwenela njalo. Ngokubaluleka kwenkcubeko ye-pop, kuphela kwendlela uSony anokukhuphisana ngayo nokuthandwa kweDisney kunye neWB. Kutheni usabelana ngezinzuzo, ngokunyanisekileyo?
Ukuhlala kubambisene neDisney kuthetha ukuba uSony ukwaphantsi kwemiqobo yezikhokelo ezingqongqo zeMarvel, ucacisa uBock. Kubude bexesha elaneleyo, inokubakho ngobuchule. Ekugqibeleni, ihla iye emalini kwaye eso sisigqibo esimalunga nokuzonwabisa kwezorhwebo.
Ukuba Kwivesi yeSigcawu kwaqinisekisa nantoni na, yayikukuba uSony angazimela kude nokuba zeziphi iimuvi zencwadi yemidlalo bhanyabhanya 'ekufanele ukuba zizo kwaye zibe nempumelelo engagungqiyo, utshilo uBock. Ndiyayithanda indlela uSony avuliwe ngayo, nokuba oko kuthetha ukuba zincinci ii-crossovers ezinabalinganiswa abangaphandle kweSpidey Universe. Amaqhawe ahlukeneyo eSpidey Indoda yesigcawu: Kwivesi yesigcawu .Imifanekiso yoPapasho lweSony
Zibangcwele izibonda ezo
Oko i-Sony Pictures Universe ye-Marvel Character (SPUMC) isixelela yona
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uSony kudala wanqwenela emva kwendalo yakhe ekwabelwana ngayo nge-cinematic enabalinganiswa abangama-900 beMarvel enamalungelo ngenxa yokufunyanwa yiSpider-Man. Oku kubandakanya okucwangcisiweyo Sinister Six spinoff wamisa kwi Umntu omangalisayo weSigcawu 2 ekugqibeleni kwarhoxiswa.
Nangona kunjalo, i-trailer ye Morbius wahlekisa ngokubonakala kuVulture kaMichael Keaton, owaqala ukubonakala kwi-MCU's Indoda yesigcawu: Ukuza ekhaya . EyoMsintsi Ubomi: Makubekho iCarnage ngethemba lokwakha kwimpumelelo eyothusayo yefilimu ka-2018 (i-856 yezigidi zeedola kwihlabathi liphela). Kwaye ngoJanuwari Morbius iya kuyandisa i-SPUMC ekhulayo. Iiwebhu ezinxibelelanayo zisandula ukuqala ukujikeleza.
Indlela yokudibanisa indalo iphela inokuba nempumelelo enkulu. Kodwa iyakunyanzela.
Ukanti impumelelo ka-2012 Ababuyisi Sixhiba Waqala ugqatso olushushu eHollywood ukugxotha impumelelo ekwabelwana ngayo nge-cinema ye-cinema ye-cinema. Yayingumzamo owangqina ungxamiseka kwiiFilimu ze-DC (ezayo Danyaza Ifilimu iya kusebenza njenge-soft-reboot of kind to set things right) kunye nentlekele kwi-Universal's Dark Universe. Kufanelekile ukuzibuza ukuba ngaba u-Sony ngoku uleqa umkhwa kungangcono ukuba ungazami ukuphinda-phinda.
Iiyunivesithi zibuthathaka kakhulu, utshilo uDergarabedian. Ayisiyiyo nje ukudibanisa amachaphaza phakathi kweetoni zabalinganiswa kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde yenzeke Abaphindezeli . Indlela yokudibanisa indalo iphela inokuba nempumelelo enkulu. Yandisa indawo yabalinganiswa kunye nalapho ungaya khona ngobuchule. Kodwa ikwanyanzela ngokukutshixela kwindalo ekwabelwana ngayo ekufuneka inxibelelanise ngokulandelelana nangokulungiselela. Zombini zingenamda kwaye zinomda.
Kwelinye icala, i-Sony yenza eyayo indinyana ye-Marvel inokunyusa ixabiso lomthi ngamnye kunye nomfanekiso ngamnye we-Sony ukuba abalandeli bayazi ukuba sisiqendu esinye se-episodic kwingxelo ebanzi ebanzi. Ngakolunye uhlangothi, u-Sony uyazi kakuhle emva koko Umntu omangalisayo weSigcawu 2 ukuba amandla e-franchise yakho ihlala isekwe kumgangatho webhanyabhanya yakho yokugqibela. Inye inyathela kwaye ulahlekelwe ngamakhulu ezigidi zeedola.
Ekupheleni kosuku, iyehla ngokwenene iyeyona nto ilungele abalinganiswa kunye neemovie kwaye yeyiphi eyona ilungele abalandeli. Ukuba awufumani abalandeli ebhodini, uyalahleka. Aba asingobaphulaphuli abazakubonisa yonke into (uxolo: Igazi , Yeyake nkwenkwe qalisa kwakhona , X-Men: IPhoenix emnyama , njl). UTom Holland (L) kunye noJake Gyllenhaal (R) kwi Indoda yesigcawu: Kude nekhaya .Isony
Ngaba ezinye izitudiyo ezilwayo zingasebenzisana?
Ukusondeza ngaphandle kwimbono yeshishini, siqala ukuzibuza ukuba ingaba iDisney kunye nentsebenziswano eyimpumelelo kaSony inokukhuthaza amanye amaziko ukuba alandele. Okuninzi ngendlela efanayo xa sibona iifestile ezintsha ezinamandla, ukukhutshwa kwe-hybrid, kunye nokwabelana ngendalo yonke kwiscreen esikhulu nesincinci, imigaqo yeshishini itshintshe ngokukhawuleza kwaye imangalisayo kule minyaka idlulileyo. Ngoku, omabini amaxesha aqhelekileyo kwaye angaqhelekanga ahlala efuna iindlela ezizodwa akukho mntu wabona kusiza. Ngokubanzi, ukusebenza kunye kunokubangela imeko enenzuzo enkulu.
Sibonile incwadi yamahlaya iyunivesithi ikhula, kwaye ezo ngoku kuthiwa zihamba ziye kwiindawo ezininzi, utshilo uRobbins. Ngubani oza kuthi ngelinye ixesha ebomini bethu akukho sinema ye-cinema ye-epic proportions of more epic proportions with both Marvel and DC characters? Umthetho osemthethweni, oshishino, kunye nobuchule bokwenza lo msebenzi phakathi kweDisney kunye neWarner Bros. ubuya kuba ngumhlaba osasazekayo, kodwa unikwe ukuvela kwezi ntlobo zeemovie ukuza kuthi ga ngoku, kubonakala ngathi akunakwenzeka kum.
Umboniso bhanyabhanya luhlalutyo lwesitulo kwizicwangciso zaseHollywood zokukhutshwa okukhulu okutsha.
U-Lauren Graham Ushiya iGilmore kwiKhaya eliVunyelwe yiNtombazana
Bro Hayi! I-Scandal Rips Ngokudibana noLuntu lwaseBrony njenge-BronyCon uMseki o-Purple Tinker ekhala ngokunyelisa
'Daredevil' Umququzeleli we-Stunt ekuYileni i-One-Shot Fight Fight ye-Hero eyimfama
D'Ette Nogle Ngaba wenza iDougie
Uhlala phi lucy hale
Yimalini itikiti lesitudiyo sendalo iphela
owenza izitulo ezingcono
loluphi olona ncedo lungcono lwe turmeric